LAAMAHA AMAANKA PUNTLAND IYO GALMUDUG OO HAWLGAL WADAJIR AH KA FULIYAY GAALKACYO | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	LAAMAHA AMAANKA PUNTLAND IYO GALMUDUG OO HAWLGAL WADAJIR AH KA FULIYAY GAALKACYO
Sawirka waa Hawlgalkii xalay
Laamaha Amniga Puntland iyo Galmudug, oo ay weheliyaan Ciidamada Kumaandooska dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa xalay hawlgall wadajir ah ka fuliyay xaafado kala duwan, oo ka tirsan labada dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo.
Hawlgalkaas, waxaa si wadajir ah u fuliyay Booliiska labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug, oo kaashanaya Ciidamada PSF, PISA iyo kumaandooska DANAB ee dowladda Federaalka Soomaaliya qaybtooda ka hawlgala koonfurta Gaalkacyo.
Saraakiil ka tirsan Laamaha Amniga Gaalkacyo, oo la hadlay warbaahinta Puntland Post, ayaa sheegay in hawlgalkaasi ahaa mid si wadajir ah loogu xaqiijinayo Amniga Gaalkacyo, islamarkaana lagula dagaallamayo malayshiyaadka Al-shabaab.
Saraakiisha ayaa xaqiijiyay, in dad kala duwan lagu qabtay hawlgalkii xalay, balse ay dib ka faahfaahin doonaan markii baaritaan lagu sameeyo dadka kala duwan, ee la qabtay oo ku eedaysan Al-shabaabnimo.
LAAMAHA AMAANKA PUNTLAND IYO GALMUDUG OO HAWLGAL WADAJIR AH KA FULIYAY GAALKACYO was last modified: June 8th, 2020 by Admin
Dhageyso:-Wareysi aanu Layeelanay Gadoomiyaha Deegaanka Yeed Cabdi Thaabid,
General Odawaa oo beeniyay in ciidamada xoogga dalka ka dambeeyeen howlwadeenadii caafimaad ee lagu laayay Golalay
Weriye caan ah oo caawa shaaciyey in laga helay cudurka Coronavirus